Ihe ITO bụ ihe N-ụdị semiconductor, nke gụnyere ntụ ntụ ITO, ezubere iche, mado na -eduzi ihe nkiri na ihe nkiri ITO na -emegharị anya: ewepụghị panel ngosi (FPD) ụlọ ọrụ, dị ka ngosipụta kristal mmiri mmiri (LCD), obere ihe ngosi ihe nkiri transistor (Ngosipụta TFT-LCD), ngosipụta electroluminescent (NDỊ), ngosipụta ihe ọkụkụ (FED), elektrọnik-ọkụ ọkụ na-enwupụta ngosipụta panel dị larịị (OELD), ngosi plasma (PDP), wdg; ụlọ ọrụ fotovoltaic, dị ka selụ ihe nkiri anyanwụ dị gịrịgịrị; iko ọrụ, dị ka iko infrared reflective, iko anti-ultraviolet dị ka iko mgbidi ákwà mgbochi, ugbo elu, mgbochi ihu igwe, nkpuchi na iko Akụkụ atọ dị mkpa dị ka ụdị diski.
Ihe a na -achọ ugbu a maka ebumnuche ITO bụ ihe 150 Site na mmepe akụ na ụba China na mmụba nke ngalaba ọrụ mmepụta ihe zuru ụwa ọnụ, ọtụtụ ndị na -emepụta ihe ngosipụta mbadamba na Japan, Taiwan, na South Korea akwagala ntọala nrụpụta ha na China China. N'ọdịnihu, Ala China ga -abụ ebe nrụpụta LCD kacha ibu n'ụwa 2012 ga -akarị 500 tọn.
Maka ọkọnọ nke ebumnuche ITO, ndị na -ebubata ngwaahịa sitere na Japan. N'etiti ha, Ike Japan, Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Japan Mitsui Mining Corporation, na Japan Tosoh gụnyere ihe karịrị 80% nke ahịa ITO..
Prev: Kọwaa ihe ọmụma nke ịsụ sputtering target medium frequency magnetron sputtering
Next: Kedu ihe kpatara ihe nkiri ngwaahịa a ji ada n'oge mkpuchi mkpuchi ？？